Diyaaradaha rayidka oo maanta aan ka soo dageyn Garoonka Aadan Cadde – STAR FM SOMALIA
Diyaaradaha rayidka oo maanta aan ka soo dageyn Garoonka Aadan Cadde
Dowladda Federaalka Somaliya ayaa mar kale ku celisay in maanta o Arbaco ah, 22-ka February 2017 in aanu jiri doonin duulimaadyadii rayidka ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Hay’adda Duulista iyo Saadaasha hawada Kabtan C/waaxid Cumar Sheekh Axmed, ayaa sheegay in garoonka aanu maanta wax shaqo ah ka jirin, marka loo eego duulimaadyadii rayidka.
Waxa uu sheegay in diyaaradaha ganacsiga, iyo kuwa kale ee rakaabka ahba aysan maanta soo dageyn, horeyna loogu war geliyey, maadaama maanta ay magaalada Muqdisho imaanayaa madax ka qeybgalaysa caleema saarka madaxweyne Farmaajo.
Garoonka waxaa kasoo degi kara oo kaliya diyaaradaha sida madaxda iyo wufuuda kala duwan ee kasoo qeybgalaysa caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Somaliya.
Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana la dhigay ciidamo kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo kuwa Amisom.
Shaqaalaha Garoonka ee dadka rayidka ah u shaqeyn jiray ayaa intooda badan la fasaxay, waxaana shaqada ku jira oo kaliya shaqaalo kooban.
Midowga Yurub oo codsi u diray Madaxweyne Farmaajo